Shirkii Beelo-Waynta Kuumade Ama Afarta Absame Iyo Adeerkood Oo Maanta Kadhacay Degmada Qabribayax Gaar Ahaan Center-ka Kaaha Oo Horey Loo Yaqaanay Qaaxa. - Cakaara News
Shirkii Beelo-Waynta Kuumade Ama Afarta Absame Iyo Adeerkood Oo Maanta Kadhacay Degmada Qabribayax Gaar Ahaan Center-ka Kaaha Oo Horey Loo Yaqaanay Qaaxa.
Kaaha-Q/bayax(CN) Arbaco.Dec.03.2014, Shirkan oo ay kasoo qaybgaleen dhamaan hogaamiye dhaqameedyada beesha Kuumade oo uu hogaaminayay Garaad Kulmiye Garaad Maxamed Garaad Dool oo isugu jiray ugaasyada, culimo awdiinka iyo waxgaradka ayaa kadhacay maanta tuulada Kaaha oo horay loo yaqiinay Qaaxa oo katirsan degmada Qabribayax ee gobolka Faafan.
Sidoo kale waxaa shirka kasoo qayb galay madaxwayanaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo masuuliyiin kale oo kasocday xukuumada heer deegaan iyo heer degmo.
Shirkan beelo-waynta Kuumade oo loogu magac daray "mideeye" ayaa xambaarsana ujeedooyin ay ugu waynayd sii xoojinta horumarka, nabadgalyada iyo maamulka suuban ee DDSI.
Shirka ayaa lagu daah-furay aayadaha Qur'aanka kariimka ah, waxaana ugu horayntii kahadlay Garaad Kulmiye Garaad Maxamed Garaad Dool oo soo bandhigay ujeedooyinka shirka islamarkaana aad ugu dheeraaday doorka ay beesha Kuumade kuleedahay horumarka, nabadgalyada iyo maamulka suuban ee deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo guud aahanba dalka Itoobiya.
Garaad Kulmiye waxa uu aad uga hadlay heerka uu deegaanku maanta marayo dhanka horumarka, nabadgalyada iyo maamulka suuban iyo sida loogu baahanyahay in lasii taageero lana xoojiyo hawlaha horumarka ee sektor walba iyo nabadgalyada oo furihii horumarka ah.
Garaadka oo kahadlay qodobo badan ayaa sidoo kale sheegay in laxoojinayo midnimada beesha Kuumade oo anfacaysa islamarkaana dardar galinaysa hawlaha horumarka, nabadgalyada, maamulka suuban iyo dariswanaaga beelaha ay walaalaha yihiin beesha Kuumade ee deegaanka iyo dalkaba guud ahaan.
Hogaamiye dhaqameedyadii Kuumade ee kasocday gobolada deegaanka iyo gooba kale ayaa iyaguna qodob qodob uga hadlay hawlaha horumar, nabadgaliyo, maamul-suuban iyo doorka beesha kaga aadan ama looga baahanyahay. Ugaasyadii, suldaamadii, culimo awdiinkii iyo waxgaradkii ayaa aad ooga hadlay arimahaasi.
Waxaa aad looga hadlay horumarka iyo nadagalyada iyadoo aad loo canbaareeyay fikirada iyo falalka nabadiidka iyo xag-jirka ee ururada nabadiidka UBBO iyo wixii la halmaala. Waxayna beeshu carabka ku dhufatay in ay aad usoo dhawaynayaan dadaalka xukuumada gaar ahaan mashaariicda waawayn ee biyo-uruurinta, jidadka, laydhka, wax-soosaarka iyo dib-udajinta.
Waxaa kale oo ay beeshu kahadashay midnimada, daris-wanaaga iyo isjacaylka iyagoo sheegay in ay midnimadoodu anfacayso taageerada hawlaha horumarka iyo nabadgalayada ee xukuumaa iyo walaalaha deegaankooda iyo dalkaba.
Waxay beeshu isku qiimaysay doorka ay kaga leeyihiin horumarinta iyo xasiloonida deegaanka, dalka iyo guud ahaanba geeska Afrika. Dhanka kale waxa beesha Kuumade talooyin kusaabsanaa xoojinta horumarka iyo nabadgalyada isla qaateen masuuliyiintii kaqaybgashay shirkaasi ee kasocotay xukuumada.
Mar uu madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar kahadlay shirkaasi ayuu kawar bixiyay heerka uu maanta caalamku marayo dhanka horumarka iyo nabadgalyada isagoo tusaalooyin wax ku'ool ah soo qaatay kana waramay qorshayaasha dhaadheer iyo kuwa dhaw ee horumarka ee DDSI. Wuxuuna uga mahad celiyay beesha taageeradooda dhanka horumarka iyo nabadgalyada.
Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar waxaa uu sheegay in loo baahanyahay midnimo iyo walaaltinimo kasta oo ummada iyo caalamkaba anfacaysa, taasoo lagu hanan karo nabadgalyo iyo horumar waara.
Shirkan beelo-waynta Kuumade ayaa xambaarsanaa wadatashi, taageero, duco iyo midnimo lagu xoojinayo horumarka, nabadgalyada iyo maamuka suuba. Waxaa kale oo uu shirkani gogol xaadh u yahay caleemo saarka Garaadka beesha.
Ugu danbayntii shirkan oo duco lagusoo khatimay ayaa waxaa kasoo baxay baaq ay beeshu soo-saartay:-
1. In ay si buuxda u taageersanyihiin go'aamadii kasoo baxay shirwaynihii 8aad ee XDSHSI ee lagu qabtay magaalada Fiiq.
2. In ay si cad u taageersanyihiin waxqabadka DDSI ee nabadgalyada, horumarka iyo maamulka suuban ee ka hirgalay deegaanka iyo guulaha ay soo hooyiyeen Ciidanka Gaarka ee Liyuu Poliska.
3. Baaqa beesha Kuumade meelkasta oo ay joogaan dal iyo dibad in ay ka qayb qaataan horumarka, nabadgalyada iyo maamulka suuban.
4. In ay si buuxda u taageersanyihiin dastuurka dalka iyo DDSI ee kusalaysan sinaanta shucuubta qoomiyadaha dalka iyo sinaanta diimaha.
5. Baaq beesha Kuumade in ay yeeshaan dal iyo dibadba, beelaha ay walaalaha yihiina ee deegaanka iyo kuwa guud ahaan Itoobiya ay kula noolaadaan daris-wanaag.
6. In ay canbaareeyeen ururada nabadiidka sida UBBO iyo dhamaan ururada xagjirka ah.